Start Menu Features ကိုပြင်ရအောင်။
Start Menu မှာရှိတဲ့ Features တွေကိုပြင်ကြည့်ရအောင်။ စိတ်ချရအောင် Registry တွေကို backup လုပ်ထားဖို့လိုတယ်နော်။ နောက်မှ ကိုကျော်စိုးကြိုမပြောလို့ဖြစ်နေမယ်နော်။
1. Start --- Run မှာ regedit ရိုက် Enter ခေါက်ပါ။
2. HKEY_CURRENT_USER\_Software\_Microsoft\_Windows\_CurrentVersion\_Policies\_Explorer သွားပါ။
3. ညာဘက်မှာ အဖြူရောင် blank မှာ right click --- New --- CLK DWORD VALUE ကိုရွေးပါ။
4. NoClose ရိုက် တန်ဖိုးကို Zero ပေး ပြီးရင် စက်ကို Restart လုပ်ပေးပါ။ [ ဒီ Entries ကတော့ Start Menu က Turn Off Computer ကိုပိတ်တာပါ။
မှတ်ချက် ။ ။ registry entries မှာ DWORD Values မှာ တန်ဖိုးကို 1 ဆိုရင် Enabled,0ဆိုရင် Disabled ဆိုတာပါပဲ။
Start Menu ရှိ Help ကိုပိတ်ခြင်း
Registry Value : NoSMHelp
Start Menu ရှိ Search ကိုပိတ်ခြင်း။ (Disable)
Registry Value : NoFind
Start Menu ရှိ Logoff ကိုပိတ်ခြင်း။ (Disable)
Registry Value : StartMenuLogoff
Start Menu ထိပ်ရှိ user name ကိုဖျောက်ခြင်း။ (Disable)
Registry Value : NoUserNameInStartMenu
Start Menu ၏ properties နှင့် Task bar ၏ Settings များကို ဖျောက်ထားခြင်း/ ပိတ်ခြင်း (Disable)
Registry Value : NoSetTaskbar
Start Menu ရှိ Network Connectionsကို ဖယ်ရှားခြင်း (Disable)
Registry Value : NoNetworkConnections
Start Menu ရှိ Run ကို ဖယ်ရှားခြင်း (Disable)
Registry Value : NoRun
မှတ်ချက် - Start menu ရှိ run ပျောက်နေပါက command prompt (CMD) ဖြင့် regedit ရိုက်ပြီး registry ကိုပြန်ဝင် နိုင်သည်။
Start Menu ကို drag & drop နည်းလမ်းဖြင့်ရွှေ့ပြောင်းခြင်း ၊ resize (ကျဉ်း၊ကျယ်လုပ်ခြင်း)များကိုပိတ်သည်။
Posted by masterpieces at 5:04 AM